Okirikiri ala 10 kachasị mma n'ụwa | Akụkọ Njem
Okirikiri ala 10 kachasị mma n'ụwa
Susana Garcia | | General, njem
Anyị na-ekwukarị banyere mba ndị anyị chọrọ ileta, ihe ncheta, ugwu ndị dị elu, oke ọhịa, osimiri na mbara ala ndị mara mma. Mana ka anyị ghara ichefu na oge ụfọdụ enwere ụwa niile ịchọpụta n’ime ala, ya na ọgba ndị nọrọ ebe ahụ kemgbe ọtụtụ puku afọ ma zoo ọtụtụ ihe nzuzo. Taa, anyị ga-egosi gị 10 ala kacha mma n'ime ala, nwere ọgba dị egwu na ebe dị iche iche.
Ga ileta ọgba ndị a bụ ezigbo nchọta, ọkachasị maka ndị nwere ọvingụ, ndị na-amụ maka oghere ọgba. okpuru ala, osisi ya na anụmanụ ya. E nwere ịrịba ebe n'okpuruala na-aghọkwa mkpa ebe nleta na mba ha, n'ihi ya, echefula ha. Ọ ga-adị ka ịnụ ụtọ Jules Verne 'njem nke etiti nke ụwa'.
1 Eisriesenwelt ọgba dị na Alps nke Austria
2 Ọgba Reed Flute dị na China
3 Waitomo Ndịgba na New Zealand
4 Majlis al Jinn Caves na Oman
5 Skocjan Caves na Slovenia
6 Carlsbad Caverns ke New Mexico
7 Kverkfjöll Caves na Iceland
8 Caves nke Drach na Mallorca
9 Khao Bin Caves dị na Thailand
Eisriesenwelt ọgba dị na Alps nke Austria
Anyị na-amalite site n'ọgba nke na-aghọ a ebe obibi ice, dị kilomita 40 site na Salzburg na Alps nke Austria. Ọ bụ otu n'ime ọgba ndị na-adọrọ mmasị, n'ihi na n'elu oghere dị n'okike ikuku mmiri na-egbochi mmiri dị ugbu a, yana mgbanwe nke ihu igwe na okwukwo, ice a gbazee ma gbanwee ụdị ya, yabụ na ọ ga-abụ ihe ọhụụ.ma na-agbanwe mgbe niile . A na-emeghe ọgba ndị a site na Mee 1 ruo Ọktọba 26, na-emechi n'oge oyi, ọ bụkwa naanị ngalaba mbụ nwere ike ịnweta maka ọha na eze, n'agbanyeghị na ha na-ezo kilomita 42 na veranda.
Ọgba Reed Flute dị na China
Ndị a bụ ụfọdụ ọgba ndị mara mma dị na Guilin, mpaghara Guanxi, na China. Ọ bụ ebe ọtụtụ ndị njem nleta na-abịa ịhụ ejije ọkụ nke nwere nzu nzu, ya na stalactites na stalagmites. Ihe ngosi nke juputara na psychedelia maka ndi choro ihu ndi ozo site na uzo ozo.
Waitomo Ndịgba na New Zealand
N'okpuru ala ahịhịa ndụ nke Waitomo anyị nwere ike ịchọta ọgba na ọbụna ọdọ mmiri n'okpuru ala n'ime ọgba ndị a sitere na ntinye nke iyi mmiri dị n'okpuru mmiri site na limestone. Ha kwụpụta n'ihi na anyị nwere ike ịchọta ndị agha niile ụmụ ọkụ ọkụ ndị juputara n'ọgba. Mgbe ọkụ na-apụ, ị nwere ike ịhụ ngosipụta dị egwu na ọkụ na-enwu ihe niile.
Majlis al Jinn Caves na Oman
Ọgba a dị na Selma Plateau, n’ime ime ime obodo Oman nke ọtụtụ mmadụ na-abịaghị. Ga-enwerịrị nzube naanị iji hụ nnukwu ọgba a, nke nwere ike ịbụ nnukwu ọnụ ụlọ ọgba n'ụwa. Aha gị pụtara 'ebe ichikota ihe'. Ọ bụ nke itoolu kachasị n'ụwa ma ọ bụrụ na anyị atụchaa ya naanị site n'elu.
Skocjan Caves na Slovenia
Ọgba ndị a bụ naanị ebe ekwuputara na Slovenia Ihe nketa nke ndi mmadu site na unesco, ya mere, ọ bụ ọla dị okpueze. Ha dị ọtụtụ nde afọ ma biri na mgbe ochie, ya mere ha bara oke uru. Otu n'ime ebe kachasị mma bụ akwa mmiri dị na Reka, nke na-echetara anyị ọnọdụ ahụ site na 'The Lord of the Rings' ebe Gandalf chere Balrog na Moria ihu. O doro anya na ọ bụ nnukwu nleta maka ndị na-egwu egwuregwu ahụ.
Carlsbad Caverns ke New Mexico
Ọgba ndị a dị na United States, n'ogige ntụrụndụ mba dị na New Mexico. Ogige ahụ nwere 117 ama ama ama ama ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ njem dị iche iche na nleta, yana oghere ndị dị egwu na stalactites na stalagmites nke mmiri na-ada. Na mgbakwunye, ogige mba a anaghị emechi, belụsọ n’ụbọchị ekeresimesi, yabụ anyị nwere ike ịga leta ya mgbe ọ bụla anyị chọrọ.
Kverkfjöll Caves na Iceland
Ọgba ndị dị na Iceland enweghị ike ịbụ ọgba nkịtị, ha bụkwa ọgba ice emere site na ikuku ikuku. Nke a bụ ihe ice ọgba kwesịrị ekwesị, nke e guzobere n'ime glasia. Okirikiri ala dị egwu, mana dịka ọ na-agbanwe agbanwe, ị kwesịrị iso onye maara ọgba ndị ahụ mgbe niile.
Caves nke Drach na Mallorca
Ndị a bụ ọgba ndị kachasị nso anyị nwere, ọ nweghịkwa ihe ha ga-emere anyaụfụ maka ọtụtụ akụkụ ala ala nke anyị hụwororịị. Ha dị na Porto Cristo, na Mallorca. Ke adianade do, abaitiat emi nwere n'ime otu n'ime ọdọ mmiri kacha ukwuu n'ụwa, Ọdọ Mmiri Martel. Nwere ike iburu ụgbọ mmiri n'ime ọgba, ma geekwa egwu, ihe na-atọ ụtọ, n'ihi na ọgba na-enwekarị egwu acoustics.
Khao Bin Caves dị na Thailand
Ọ bụrụ na anyị chere na nke ahụ Tailandia ihe niile mara mma dị n'ụsọ osimiri ya na n'okirikiri ala ya, anyị ga-amarakwa na e nwere ọgba ndị dị ka nke Khao Bin. Ndị a bụ naanị kilomita 20 site na obodo Ratchaburi, n'ime ha anyị nwere ike ịhụ ụdị akpụrụ akpụ kachasị na okwute, yana stalactites na stalagmites.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Okirikiri ala 10 kachasị mma n'ụwa
Kedu ihe bụ njem ịchụ nta?
Ihe ị ga-ahụ na Bucharest, isi obodo Romania